Talohan'ny 2010 dia ny "Sous-préfet" ( =chef de district ) na ny Lefiny no lehiben'io Kaomisiona io ary Mpikambana ao ihany koa ny solon-tena avy ao amin'ny Kaominina, avy ao amin'ny Ministeran'ny Fambolena, ary ny ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Fandrefesan-tany ("Service topographique").
Araka ny Didim-Panjakàna ("Décret") 2010-233 tamin'ny 20/04/2010 kosa dia ny ao amin'ny Sampan-draharahan'ny FANANAN-TANY (" Services des Domaines)" sisa no mitantana an'io Kaomisiona io ka Mpikambana ny ao amin'ny "Service Topographique", sy ny Kaominina ary ny fokontany.
Marihina fa tsy mitsangana ary midina eny an-toerana io Kaomisiona io raha tsy MISY NY FIANTSOANA ("convocation") ALEFAN'NY FILOHANY!!..Misy "affichage" atao eny an-toerana manambara ny fiavian'ny Kaomisiona!..Tokony hanatrika eo daholo mantsy ny tompon'ny tany mifanila amin'ilay tany hotsirihina.
3-) Manao Fitànana an-tsoratra ny Fitsirihana ny fanamaintisa-molaly ("Procès Verbal de constatation de mise en valeur") io Kaomisiona io.
4-) Alefan'ny "DOMAINES" any amin'ny Fitsaràna ny antontan-taratasy rehetra ("dossier") miaraka amin'ilay Fitànana an-Tsoratra ("Procès Verbal") voalaza etsy aloha.
5)-Manao fitoriana an'ilay ..olona misoratra amin'ny Tany ("propriétaire inscrit sur le titre foncier") amin'izay ilay olona nanamainty molaly ka maniry ny hisoratan'ny tany aminy.
6-) Mivoaka ny didim-pitsaràna....Raha ekena ny fitorian'ilay olona dia ..AMBARA FA LASANY IZANY ILAY TANY NOHAMAINTISINY MOLALY!!....
7-) Rehefa RAIKITRA IO DIDIM-PITSARàNA io (Izany hoe...tapitra ny fe-potoana nanaovana ny fampakàrana na "appel") dia ..AZO AMPIHARINA amin'izay. Koa lasa ilay olona mitondra izany any amin'ny "DOMAINES" mba hanatanterahana ny fanoratana aminy ny tany.
Fanontaniana mipetraka avy hatrany ny hoe :
"AIZA àry NO METY ISIAN'NY KOLIKOLY HAHAZOANA AN-TSOKOSOKO NY TANIN'OLONA amin'ny alalan'io FIZAKà-MANANA ("prescription acquisitive") IO "?
1-) Eo amin'ilay FITSIRIHANA NY FANAMAINTISA-MOLALY("constatation de mise en valeur"): ATAO ENY AMBONY LATABATRA ("sur table"); izany hoe...ANY ANATY BIRAO fa ..TSY MIDINA ENY AN-TOERANA AKORY ILAY KAOMISIONA voalaza etsy ambony!!!!..Tsisy ny "affichage". Tsisy koa ny "convocation" natao hampiantsoana ireo Mpikambana hidina eny an-toerana!...Any anaty Birao araka izany no arafitra ilay Fitànana an-tsoratra ny fanamaintisa-molaly ("Procès Verbal de Constatation de mise en valeur").
2-) Eny amin'ny Fitsaràna: ATAO AN-TSOKOSOKO NY FITSARàNA ny raharaha!..Izany hoe, INIANA TSY ALEFA MIHITSY NY Taratasy FAMPIANTSOANA ("convocation") an'ILAY OLONA MISORATRA amin'ny Tany !..
3-) Ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Fananantany ("service des domaines") sy ny Fandrefesan-tany ("service topographique"): ATAO FARAN'IZAY HAINGANA NY FAMOAHANA NY ...bokin-tany ho ..fampiharana ilay Didim-Pitsaràna!.
Raha efa izany dia..matetika,...AMIDY MALAKY na ....ATAO ANTOKA INDRAMAM-BOLA amin'ny Banky ilay tany!...Ilay tena tompony misoratra amin'ny Tany (ary manamainty molaly azy amim-pilaminana!) anefa amin'io dia tsy mahalala na inona na inona akory!...
Farany, ilay nahazo na ..nividy ny tany no mandroaka azy ireo eo!..Dia RAIKITRA NY GIDRAGIDRA!!!...
Fanontaniana tena manitikitika dia ity: "INONA NO VAHA-OLANA AZON'NY OLONA MISORATRA amin'ny tany ary TENA TOMPONY ATAO MANOLOANA IZANY FAKàNA NY TANINY AN-TSOKOSOKO IZANY?"
1-) Ady madio eny amin'ny Fitsaràna ("affaire civile"): Angatahana ny fanafoanana("annulation") an'ilay "titre foncier" vaovao azo taty aoriana!.
Porofoina amin'izany fa ..TSY VOAHAJA ny fepetra napetraky ny Lalàna etsy ambony tamin'ny nahazoana azy; eny; nisy mihitsy aza ny hosoka!..
2-) Ady Heloka: Mametraka fitoriana any amin'ny BIANCO sy ny FAMPANOAVANA ny amin'ny fisian'ny kolikoly ("corruption") sy ny hosoka ("faux en écriture")!!..Marihina fa azo ampiarahana ireo lalan-kaleha roa ireo!...
Fanontaniana misarika ny saina koa dia ny hoe:"AHOANA NY FOMBA ISOROHANA AN'IO FAKàNA TANY AN-TSOKOSOKO amin'ny alalan'ny FIZAKàNA SANDOKA IO?"
Ho an'ny misoratra amin'ny tany dia:
1-)TSIRIHO MATETIKA ny TANY sao sanatria dia MISY MIBODO AZY AN-TSOKOSOKO!
2-) alaivo matetitetika (isan'enim-bolana, ohatra) any amin'ny Sampan-draharahan'ny Fananantany ("Service des Domaines") ny "Certificat d'immatriculation et de situation juridique" hamantarana raha mbola misoratra tsara aminao na tsia ny tany!
Cialis O Sildenafil Finasteride Il Cialis Aiuta [url=http://sildenafdosage.com]viagra[/url] Amoxicillin Small Intestine Overgrowth Syndrome
samedi, 28 octobre 2017 10:02
Looking For Sildenafil Buy Lasix In Canada En Ligne Priligy Generique [url=http://howmuchisvia.com]viagra[/url] Sibutramina Interacting With Amoxil Cephalexin Shortage Kamagra Plus Cialis
dimanche, 22 octobre 2017 22:36
Kamagra Products [url=http://cialtobuy.com ]cialis[/url] Cialis Tabs
Bula Amoxil Bd Prix De Kamagra Cialis Fr Prix
Le Cialis Blog viagra cialis Least Expensive Azithromycin
mercredi, 20 septembre 2017 21:51
Original Kamagra Kaufen [url=http://cialtobuy.com ]cialis[/url] Generique Du Cialis
Buy Online No Rx Onlinephatmacies buy accutane in usa
Amoxicillin Dosage For Strep cialis Cialis Potenz
dimanche, 17 septembre 2017 20:24